Raikitra ny ady rehefa samy mamo: maty nodarohin’ny vadiny ilay ramatoa - ewa.mg
Raikitra ny ady rehefa samy mamo: maty nodarohin’ny vadiny ilay ramatoa
News - Raikitra ny ady rehefa samy mamo: maty nodarohin’ny vadiny ilay ramatoa
Nihoatra ny alikaola…
Nifamaly ireto mpivady rehefa mamomamo ka tonga tany amin’ny
fifampikasihan-tanana izany. Vokany, naratra mafy tsy nahatsiaro
tena ilay ramatoa, noho ny daroka nataon’ny vadiny. Tsy tana ny
ainy na dia nentina teny amin’ny hôpitaly
Vehivavy 23 taona iray namoy ny
ainy rehefa avy nifamaly tamin’ny vadiny vao 19 taona, ny alin’ny
talata teo teny Ambodivona-Soavimasoandro. Tsy nahatsiaro tena ilay
vehivavy rehefa avy voadroka sy voavely kifafa ary nitarika ny
fahafatesany ny vono sy ratra mafy nahazo azy. Fantatra fa mpivady
niray trano nandritra ny enin-taona ireo nifamaly. Tsy mbola vita
fomba ary mbola tsy niteraka ihany koa. « Ny harivan’ny 13
oktobra io, rehefa avy niasa izy mivady dia nisotrosotro tany
ivelany », hoy ny fanazavan’ny polisim-pirenena,
loharanom-baovao. Nandritra izany, nivoaka kely ramatoa ary nanome
vola olon-kafa. « Iny fanomezam-bola olona hafa iny no
niandohan’ny fifamaliana ka notakin’ilay lehilahy tamin’ny vadiny
izany », hoy hatrany ny fanazavana voaray. Taorian’izay,
niakatra ny hatezeran-dralehilahy ary nikasi-tanana avy hatrany
izy. Tsy ampy azy ny famelezany daka sy totohondry an-dramatoa
vadiny fa mbola nangalany tahon-kifafa ihany koa nikapohany azy.
Vokany, voa mafy tandrify ny lohany ilay vehivavy. Mbola novelesiny
ihany koa ny tongony sy ny vatany.
Nahazo antso mahakasika ny tranga
ny kaomisarian’Analamahitsy ka nidina teny an-toerana avy hatrany.
Tsikaritra fa efa tsy nahatsiaro tena intsony ilay vehivavy ary
feno ratra ny lohany sy ny vatany. Nentina vonjimaika teny amin’ny
hopitaly ilay naratra, saingy tsy tana intsony ny ainy vao tonga
teny amin’ny toeram-pitsaboana. Ilay rangahy vadiny kosa nanaovana
fanadihadiana teny amin’ny kaomisaria ary natolotra ny BC 02 eny
Anosy nanohizana ny famotorana. Niakatra fampanoavana, omaly, ny
Ampahatsiahivina ny rehetra hatrany
fa misy ny « Brigade féminine de proximité » misahana
manokana ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy. Misy ihany koa ny
laharana maitso 813 ahazoana ny polisy misahana izany.
L’article Raikitra ny ady rehefa samy mamo: maty nodarohin’ny vadiny ilay ramatoa a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 16/10/2020
Dihy ankehitriny: nampiofana ireo vehivavy any Toliara i Julie I.
Nanomboka ny 15 jolay teo hatramin’ny androany, nizara ny fahalalany sy ny traikefany tamin’ireo tovovavy manan-talenta, any Toliara, i Julie Iarisoa, mpamorona sy mpanao soradihy. Niompana tamin’ny tontolon’ny dihy ankehitriny ny fiofanana, izay hita ho nahaliana ireo andriambavilanitra any an-toerana.“D’un sud à l’autre” ny lohatenin’ity tetikasa miavaka ity. Nampiharina avy hatrany amin’ny famoronana ny fianarana ka hisy ny fanehoana izany an-tsehatra, anio hariva ao amin’ny Vakok’arts Trano ao Toliara. Fampisehoana maimaimpoana, izay hanentanan’ireo mpandray anjara sy ny mpikarakara ny rehetra.Nialoha ity fampiofanana ity, namolavola soradihy iray, mitondra ny lohateny hoe “Tsioka” ihany koa i Julie Iarisoa, niaraka tamin’ny mpanakanto mpandihy any Toliara. Noforonina sy natsangana ary nomena aina nandritra ny fivahiniana, tao amin’ny Alliance française ao Toliara izany. Naharitra dimy andro ihany koa ny fiarahan’izy ireo niatrika izany asa goavana izany, izay nofaranana tamin’ny fanehoana an-tsehatra ilay soradihy, ny 12 jolay lasa teo, tao amin’ny Vakok’arts Trano hatrany.Landy R. L’article Dihy ankehitriny: nampiofana ireo vehivavy any Toliara i Julie I. a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana tany Amoron’i Mania :: Mitaky ny mangarahara ny ankamaroan’ireo kandidà
Ahiana ny hisian’ny savorovoro taorian’ny fifidianana. Nivoaka tamin’ny fahanginany ny ankamaroan’ireo kandidà nirotsaka tamin’ny fifidianana depiote, ao amin’ny faritra Amoron’i Mania. Ny talata teo, ohatra, dia naneho ny hatezerany manoloana ny voalaza fa fikasana kandidà sasany hikotrika famerenana ny latsa-bato tao amin’ny distrikan’i Fandriana ireo mpomba ny kandidà Hasimpirenena Rasolomampionona. Nambaran’izy ireo fa ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) sy ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana irery no afaka manapa-kevitra momba izany. Takin’ny mpanara-dia an’ity kandidà ity ihany koa ny fahazoana ny fahafahana vonjimaika ho an’io kandidà mitarika ny laharana voalohany ao Fandriana io. An-kilan’izay, manahy mafy amin’ny mety ho fisiana hosoka tamin’ny latsa-bato tamin’ny fifidianana depiote tao amin’ny distrikan’Ambositra ny kandidà Andrianirina Onjanantenaina Davidson. L’article Fifidianana tany Amoron’i Mania :: Mitaky ny mangarahara ny ankamaroan’ireo kandidà est apparu en premier sur AoRaha.
Boriborintany faha-3: nahazo “kit scolaire” ireo mpianatra
Amin’izao ankatoky ny fidiran’ny mpianatra izao, nanao tantsoroka fanomezana fitaovam-pianarana ho an’ireo ankizy sahirana miisa 100, avy eny amin’ny fianarana miankina sy tsy miankina eny amin’ny ambaratonga voalohany, izay mipetraka eny amin’ny faritra iva, ny avy ao amin’ny boriborintany fahatelo, kaominina Antananarivo Renivohitra, sy ny mpiara- miombon’antoka aminy, ny Iarivo Lion’s Club. Tafiditra amin’ny vina sosialin’ny kaominina ny fitsinjovana ny ankizy sahirana sy ny hahafahan’ny ankizy miatrika tsara ny taom-pianarany. Marihina fa nahazo tombony tamin’izany ny fokontany miisa dimy: Andranomahery, Tsaramasay, Ankorondrano Andrefana, Ankazomanga- Andraharo ary Ankorondrano Atsinanana. Ankizy dimy taona hatramin’ny 12 taona ny voakasika tamin’izany. Nisy ny fanadihadihana nataon’ny CUA teny anivon’ny Cisco sy ny Gap mikasika ireo ankizy nizarana fitaovam-pianarana ireo. Betsaka ireo ankizy misedra olana amin’ny fidirana mianatra ary tsy mbola manana fitaovana akory vokatry ny fahasahiranan’ny ray aman-dreniny. Ny delegen’ny boriborintany fahatelo, Razafitsalama Hery, sy ny fikambanana Iarivo Lion’s Club no nitarika ny hetsika teny an-toerana. Tatiana AL’article Boriborintany faha-3: nahazo “kit scolaire” ireo mpianatra a été récupéré chez Newsmada.
Fanafian-jiolahy :: Ramatoa iray naratra voatifitra sady voaroba roa tapitrisa ariary
Nisehoana fanafihan-jiolahy tao Moararano Toamasina, omaly, tokony ho tamin’ny roa ora maraina. Voalaza fa tranona depiote teo aloha ity lasibatra ity. Naratra voatifitra ny vehivavy iray tao an-trano. Voaroba ny vola roa tapitrisa ariary. Tsy mbola tonga nanatona ny mpitandro filaminana, hatramin’ny omaly tolakandro nakàna ny vaovao farany, ny tompon-trano lasibatra. Efa misokatra kosa ny fanadihadiana hikarohana an’ireo olon-dratsy. Lehilahy roa nisaron-tava no nanafika, tamin’io maraina io. Nopitsohina ny varavarana nahafahana niditra tao an-trano. Voahambana basy ny olona rehetra tao. Nitifitra ireo jiolahy, taorian’izay. Nambaran’ny loharanom-baovao iray eo anivon’ny mpitandro filaminana fa ora telo, taorian’ny nitrangan’ny fanafihana, vao nanao fampandrenesana ireo voatafika. Samy tonga teny an-toerana ny zandary sy ny polisy. Ireto farany no misahana ny fanadihadiana. «Zaobavin’ilay solombavambahoaka teo aloha io voatifitra io. Efa manaraka fitsaboana izy. Halaina am-bavany eny amin’ny hopitaly izy, amin’ny fotoana mahamety izany, raha toa ka tsy tonga manatona eny amin’ny birao», hoy ny polisy any Toa- masina.Efa eo am-pelantanan’ny polisy ihany koa ny fikarohana an’ireo jiolahy nanafika tranona minisitra teo aloha sady kandidà tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo, tao Morafeno Toamasina, ny alin’ny sabotsy lasa teo. Voalaza fa nanapoaka basy ireo mpanafika. L’article Fanafian-jiolahy :: Ramatoa iray naratra voatifitra sady voaroba roa tapitrisa ariary est apparu en premier sur AoRaha.
Tantara sy finoana: 150 taona ny FJKM Ambohimamory
Vohitra iray anisan’ny manan-tantara eto Imerina i Ambohimamory. Anisan’ny nanamarika vanim-potoana iray lehibe ny fijoroan’ny fiangonana FJKM, 150 taona lasa izay. Ireo no hiaraka ao anatina hetsika iray hotontosaina eny an-toerana ao anatin’ny andro efatra, ao amin’ny FJKM Ambohimamory Malala OrimbatoManomboka anio 3 aogositra, fampirantiana ny tantara. Rahampitso 4 aogositra, miditra amin’ny 7 ora sy amin’ny 10 ora maraina ny fiangonana. Mitohy hatrany ny fampirantiana aorian’izay. Ny 10 aogositra tontolo andro, fanohizana ny fampirantiana. Ny 11 aogositra, ivon’ny jobily faha-150 taon’ny fiangonana FJKM Ambohimamory Malala Orimbato. Miditra amin’ny 8 ora maraina ny fanompoam-pivavahana. Fijoroan’ny isan-taranaka (vokatra) hitondra fanilo miampita. Hisy ny sakafon-jobily.Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa misy ny antsoina hoe « komitin’ny faha-15 aogositra ». Isaky ny amin’io andro io no hihaonan’ny zanak ‘Ambohimamory hanehoana ny talentan’izy ireo. Raha ny voalazan’ny tantara, Ambohimitsinjorano ny anaran’ity vohitra ity fahiny. Nanjary Ambohimamory izy taty aoriana. Anisan’ireo toerana fihaonan’ny andriambaventy teto Imerina.HaRy Razafindrakoto L’article Tantara sy finoana: 150 taona ny FJKM Ambohimamory a été récupéré chez Newsmada.
Niakatra 50 ariary indray ny vidin-tsolika nanomboka, omaly maraina. Tafakatra 4 200 ariary ny litatry ny lasantsy raha 4 150 ariary izany teo aloha. Ny gazoala ihany koa dia lasa 3550 ariary raha 3500 ariary teo aloha. Tsy nahafantatra ny antony mampiakatra ny vidin-tsolika kosa ireo tompon’andraikitry ny mpaninjara solika fa fanarahana baikon’ny lehibe ihany no ataon’izy ireo. Mampikaikaika ny olon-tsotra ity fiakarana vidin-tsolika ity satria ahiana indray ny hiakaran’ny vidin’entana ilaina amin’ny andavanandro na (PPN) sy ny saran-dalana. Raha tsiahivana dia tamin’ny volana septambra 2018 no nisy fiakarana farany ny solika teto Madagasikara. L’article Vidin-tsolika est apparu en premier sur AoRaha.
Literatiora: hampahafantatra ny boky vaovaony i Johary Ravaloson
“Amour, patrie et soupe de crabes”… Tsy lany aingam-panahy ary manana ny fomba fijeriny manokana amin’ny lafin-javatra tsy lavitra ny andavanandrom-piainan’ny Malagasy, i Johary Ravaloson, tsy zovina intsony eo amin’ny asa soratra. Mitaona ny mpamaky hamakivaky an’Antananarivo, manomboka eny amin’ireo toerana nambolena vary hatramin’izay, saingy nototofana, hatreny amin’ireo rano miboiboika, eny amin’ireo trano fonenana tsara tarehy sy voaaro, ny mpanoratra.Boky tantara fahefatra nosoratan’i Johary Ravaloson ny « Amour, patrie et soupe de crabes », nivoaka tamim-pomba ofisialy, ny 29 marsa teo. Rahampitso ny hampahafantarany izany voalohany, eto an-tanindrazana, etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely.Ankoatra ity boky tantara ho an’ny tanora ity, hampahafantariny amin’io fotoana io koa ny gazety boky « Lettres de lémurie », manasongadina ireo mpanoratra aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Hita ao anatin’ity andiany faharoa ity ny lahatsoratra nataona mpanoratra malagasy, maorisianina ary reonioney. Marihina fa ity gazety boky ity no nandrombaka ny loka lehiben’ny mpitsara, tany amin’ny “Salon du livre insulaire”, tamin’ny herintaona.Mpanoratra, mpandika teny ary mpanonta boky i Johary Ravaloson. Anisan’ny imasoany ny fanaparitahana ny kolontsaina sy ny sanganasan’ireo mpanoratra aty atsimo andrefan’ny ranomasimbe Indianina. Amin’izao fotoana izao, ao anatin’ny fandikana ny boky tantara nosoratan’i ED Andriamalala ity mpanoratra ity. Landy R. L’article Literatiora: hampahafantatra ny boky vaovaony i Johary Ravaloson a été récupéré chez Newsmada.
Mila mailo: misy misandoka ho mpitsabo maso
Tokony ho mailo ny rehetra, indrindra any ambanivohitra, fa misy ny olona maso mitety vohitra mitonona ho mpitsabo mandray an-tanana marary ary manome fanafody. Tranga iray niseho tany amin’ny faritra ivelan’ny Renivohitra, nitarika fahasimban’ny mason’ny zaza vao 15 volana, izany. Noho ny fanafody (collyre) nomen’ny olona nisandoka ho mpitsabo maso ny nahatonga izany. Efa mandeha ny fanadihadian’ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fahasalamana amin’izao fotoana izao momba io tranga io. Ireo rehetra mitonona ho fikambanana misehatra amin’ny fahasalaman’ny maso, tsy maintsy manana fifanaraham-piaraha-miasa avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana.Tokony hanana mpitsabo manana fahaizana manokana amin’ny fitsaboana maso koa izy ireo, araka ny fanambaran’ny tomponandraikitra ny minisiteran’ny Fahasalamana. Mialoha ny hanatanerahana ny asa, mila mitondra ireo antontan-taratasy voalaza ireo eny amin’ny tomponandraiktiry ny fahasalamana ao an-toerana ilay fikambanana.Vonjy A. L’article Mila mailo: misy misandoka ho mpitsabo maso a été récupéré chez Newsmada.
Nambaran’ny loharanom-baovao iray eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana fa nafindra eny amin’ny fonjan’Antanimora ny roapolo tamin’ireo miaramila voatazona, teny Tsiafahy, noho ny raharaha vono olona, tamin’ny volana mey lasa teo. Najanona ao amin’ny fonjaben’i Tsiafahy kosa ny fito ambiny. Tsy fantatra mazava ny anton’ny famindrana azy ireo, araka ny voalazan’ny loharanom-baovao hatrany. L’article Famindrana miaramila est apparu en premier sur AoRaha.
Source : CCO COVID19 - 31/10/2020
Noho ny Covid-19: nofoanana ny fampisehoana
Mbola eo ihany ny valanaretina covid-19! Nisy nikarakara fampisehoana nakàna mpanakanto malaza, tao Manakambahiny-Andrefana, Disitrikan’Ambatondrazaka. Nokasaina hotanterahina ny alahady 25 oktobra teo izany. Anisan’ny tarika nokasaina hiseho tamin’izany ny tarika Jean Aimé. Raha ny fantatra, efa voafandrika mialoha ireo mpisehatra. Ny 20 oktobra, nandefa taratasy fanakanana ny hanatanterahana izany fapisehoana izany ny ao amin’ny Fitaleavam-paritry ny Fahasalamana.Ny 22 oktobra io rafitry ny minisiteran’ny fahasalamana io no nanao tatitra tao amin’ny Radio iray ao Ambatondrazaka fa ny disitrikan’Anosibe an’Ala sy ny Andilamena no tsy ahitàna olona voamarina fa mitondra Covid-19. Nanantena ireo nikarakara fampisehoana fa mba hisy fihatsaràna ny toe-javatra, kanjo tao Manakambahiny-Andrefana mihitsy no nisy tratran’ny covid-19 miisa telo sy tranga mampiahiahy 16! Nofoanana ilay fampisehoana… Samy mbola tokony hanao arovava sy orona avokoa ny aty Ambatondrazaka.RarivoL’article Noho ny Covid-19: nofoanana ny fampisehoana a été récupéré chez Newsmada.
Baolina kitra – Can 2021 :: Miandry ny Filoha ny fidiran’ i Côte d’Ivoire eto amintsika
Miankina tanteraka amin’ny fanapahan-kevitry ny Filohan’ny Repoblika malagasy sy ny valanaretina Covid-19, amin’ny fanokafana ny lanitr’i Madagasikara, ny mety hahatanteraka ny lalaon’ny Barean’i Madagasikara sy ny Elefanta Ivoariana eto amintsika, amin’ny 17 novambra ho avy izao. Mikaroka ny fomba rehetra hialana amin’izany ny Federasiona ivoariana (FIF), raha mino sy manantena ny hahatontosa ny lalao any Barikadimy kosa ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra. Niangavy tamin’ny Kaonfederasiona afrikanina (CAF) ny hanaovana an’io lalao io any amin’ny firenen-kafa, noho ny fikatonan’ny sisin-tany malagasy. Mbola tsy namaly izany hetahetan’izy ireo izany anefa ny CAF. Etsy an-kilany, mangataka fahazoan-dalana manokana, homena ny delegasiona ivoariana hahafahan’izy ireo miditra eto hanatontosana ny fihaonana eo amin’ny roa tonta, any any amin’ny Filohampirenena ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). “Tsy hikatona foana akory ny sisin-tany malagasy. Ny azo antoka dia hatao eto amintsika ny lalao miverina hifandonan’i Barea sy i Côte d’Ivoire”, hoy Andrianony Victorien, filoha vonjimaikan’ny FMF. L’article Baolina kitra – Can 2021 :: Miandry ny Filoha ny fidiran’ i Côte d’Ivoire eto amintsika est apparu en premier sur AoRaha.
Taona 2020, tsy nisy afa-tsy ny resaka Covid-19 ny niainana nandritra izay fito volana mahery izay, tsy eto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao.Ankehitriny, sarotra ny fandidiana ao Frantsa ao. Maro ireo maty, mitovy amin’ireo namoy ny ainy teto Madagasikara nandritra ny fito volana ny maty any an-toerana tao anatin’ny indray andro, raha ny tarehimarika nivoaka omaly.Manoloana izany, fotoana izao handraisana fepetra hentitra tsy hiverenan’ny aretina eto Madagasikara intsony. “Izay tsara fiomanana, tsy tampohin-doza”, hoy ny fahendrena malagasy. Saingy, toa mbola goragora ny fanarahana ny fepetra raisina, hatreto. Izay tojo ny maso sy mifanena ihany no voasazy. Raha ny hita any anaty elakela-trano any anefa, ambony dia ambony ny tahan’ny tsy fanaovana arovava. Koa raha tiana ny tsy hihanahan’ny valanaretina eto amin’ny firenena, mila atao hentitra izany fanaraha-maso izany. Fotoana izao hamehezana izay efa voafatotra tsy hivaha intsony.“Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa”, araka ny fomba fisainana malagasy ihany. Mifono zava-dalina izany. Fantatry ny miaina amin’ny maha Malagasy azy. Iza tokoa moa ny miaina eto Madagasikara raha tsy Malagasy? Fotoana izao hanandratana izany, eny, hiaina mihitsy fa tsy fomba eo imolotra fotsiny. Ny miaina amin’ny maha izy azy ny tena no tena fahombiazana amin’izay atao eo amin’ny anaran-drain’ny tena.Voateny tsy nahy ilay hoe anaran-dray, saingy izay ilay rafi-piarahamonina eto Madagasikara. “Fianakaviana momba ray”, nahazoana io anarana io. Malagasy ny eto ka mila miaina amin’ny maha Malagasy azy. Fotoana ary izao hiverenana amin’izay rafi-piarahamonina izay. Tsy handaitra eto izay karazana honohono sy tsaho miely etsy sy eroa raha toa ka mahatsapa tena ny tsirairay fa Malagasy izy, miaina sy mivelona eto Mafagasikara: fomba, fisaina, fototra niaviana ary indrindra, ny kolontsaina. Anjaran’ny tsirairay ny mandini-tena hoe: iza izy? Fotoana izao…Andry FenomananaL’article Fotoana izao… a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fihibohana any Frantsa: mangataka hanemorana ny lalaon’ i Barea sy ny Elefanta i Dupuis
Mandalo fotoan-tsarotra ny Barea de Madagascar, amin’izao fotoana izao, satria miverina mihiboka indray ny any Frantsa ka tsy ho afaka hamonjy ny ekipam-pirenena malagasy ireo mpilalao mipetraka any. Miteraka olana goavana ho an’ny baolina kitra afrikanina sy maneran-tany mihitsy ny fiverenan’ny fihiboana ho an’i Frantsa. Anisan’ireo voakasik’izany ny Barea de Madagascar, hiatrika tsy ho ela ny lalao mandroso, hiadian-toerana amin’ny “Can 2022”. Fihaonana, hikatrohana amin’ny Elefantan’i Cote d’Ivoire, ny 14 sy ny 17 novambra ho avy izao. Manoloana izany, nanao fangatahana ny amin’ny tokony hanemorana ny lalao i Nicolas Dupuis, ary nandefa filazana any amin’ny federasiona lalagasy (FMF) hitady vahaolana amin’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf).Saika milalao any Frantsa avokoa mantsy ny 75 isan-jaton’ireo mandrafitra ny Barea de Madagascar. Efa nidinika momba izany ny federasiona ankehitriny ary handefa taratasy any amin’ny Caf. Tsy ny Barea de Madagascar irery no firenena tratr’ity olana goavana ity fa saika ireo ekipa goavana aty Afrika, ao anatin’izany ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Heno anefa fa tsy manaiky io fanemorana angatahin’ny Malagasy io ry zareo Ivoarianina satria vitsy ihany ireo mpilalaony no ao Frantsa.Heverina kosa fa tokony hisy ny marimaritra iraisana satria efa nanao fangatahana fanemoran-dalao ihany koa ny federasiona ivoarianina (FIF), ho an’ny lalao mandroso, tokony hotanterahina ny 12 novambra ho avy izao.Miandry ny ho valin-teny avy amin’ny kaonfederasiona afrikanina ny baolina kitra izany ny rehetra mahakasika ity tranga mahazo ny baolina kitra malagasy sy maneran-tany ity. Tsiahivina fa mihiboka hatramin’ny 1 desambra ho avy izao ny any Frantsa. Raha ekena izany ny fanemorana ny lalao, any amin’ny tapatapaky ny volana desambra vao ho raikitra indray ity lalaon’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire ity. Tompondaka L’article Kitra – Fihibohana any Frantsa: mangataka hanemorana ny lalaon’ i Barea sy ny Elefanta i Dupuis a été récupéré chez Newsmada.
Bayern de Munich : Remy Vita dans le grand bain
Rémy Vita chez les pros du Bayern de Munich. La belle aventure se poursuit pour l’ancien de l’ESTAC, Remy Vita, que le Bayern vient de recruter. Une bonne affaire pour les Munichois, car ils n’ont pas eu à casser leur tirelire pour les services du jeune Malgache. On connaît maintenant la raison qui a poussé les Bavarois à recruter Remy Vita, car Flick n’avait pas hésité à faire appel à lui pour suppléer au prodige canadien, Davies, durant son absence. Il reste à espérer que cette titularisation finira par faire céder Nicolas Dupuis pour l’intégrer chez les Barea. Clément RABARY L’article Bayern de Munich : Remy Vita dans le grand bain est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Bayern de Munich : Remy Vita dans le grand bain a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kitra – Fahasitranana: nilalao i Abel Anicet ary nandresy 3 no ho 1 ny ekipany
Afaka hitarika ny Barea Rakapy. Niakatra kianja, ny faran’ny herinandro teo, i Abel Anicet, milalao ao amin’ny Ludogorets, any Bolgaria.Nibata avy hatrany fandresena ny ekipany tamin’izany rehefa nanamontsana ny ekipan’ny Montana, tamin’ny isa 3 no ho 1. Anisan’ny nisongadina teny ambony kianja ity mpilalaon’ny Barea ity ary tolotra tsara fipetraka avy aminy ny nampidiran’ny ekipany ny baolina iray. Efa tokony ho nahatafiditra baolina maromaro koa ny lehilahy tamin’izao lalao izao.Tsy niatrika ireo lalao fanomanantenaTsy azo ihodivirana izany fa anisan’ireo mpilalao hiatrika ny fihaonana amin’ny Elefanta Ivorianina, ny volana novambra izao, Rakapy. Tsy anisan’ireo niatrika ny lalao fanomanantena indroa miantoana, natao tany Luxembourg sy tany Maraoka, nifandonana tamin’i Borkina Faso, i Abel Anicet noho ny ratra nahazo azy teo amin’ny feny havia, tamin’ny lalao nataony tany Bolgaria. Tsy maintsy notsaboina nandritra ny telo herinandro ny tovolahy vao afaka niatrika fanazarantena. Sitrana soa aman-tsara ary izao ka niakatra kianja izao hiatrika ny fifanintsanan’ny “Can 2022”, hifandonana amin’ny Elefanta Ivorianina.Synèse R. L’article Kitra – Fahasitranana: nilalao i Abel Anicet ary nandresy 3 no ho 1 ny ekipany a été récupéré chez Newsmada.
Pilo kely #4538 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4538 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
35 ireo tanora any amin’ny kaominina Bemanevika, distrikan’Ambanja, nanaraka fiofanana “Miasa na mianatra asa sahaza”. Fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy fanofanana asa sy ny Helvetas Madagascar. Fito ireo nanaraka fiofanana momba ny fahasalaman’ny biby, 12 ny nianatra momba ny zaitra ary 16 ny nanaraka fiofanana momba ny nahandro. Tanjona ny hanampiana ireo tanora any ambanivohitra, mahazo fianarana sy mianatra asa, ahafahan-dry zareo miasa tena, mampandroso ny toekarena ao amin’ny faritra. Hampiofana tanora maro ny minisitera sy ny Helvetas mialoha ny volana febroary taona 2021.Any Tanambe, distrikan’Amparafaravola, mijoro ara-dalàna hatramin’izao ny kaoperativa Ndao, ahafahan’ireo tantsaha mpikambana mifanakalo hevitra momba ny fambolem-bary. Manodidina ny 60 ha ny tany volena izy ireo, mijoro toy ny orinasa tsy miankina, ary misedra olana goavana ankehitriny. Olana ny amin’ny fahazoana hoenti-manana amin’ny voly vary, iantsoan’ny mpikambana fiaraha-miasa amin’ny fanjakana. Havaozina isaky ny dimy taona ny mpikamban’ny birao.Ho famelomana indray ny sehatry ny fizahantany, misy ny tolotra package any Belo sur Mer, faritra Menabe, ataon’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany hatramin’ny 1 novambra ho avy izao. Afaka mandray anjara ny mpandraharaha rehetra, sy ny mpandraharaha any an-toerana, hiaraha-miasa amin’ny kompania mpitatitra ana habakabaka Tsaradia. Isam-bolana ny hanaovana ny tolotra package, hisafidianana tanàna iray, toy ny any Sainte Marie, ny any Nosy Be, ny any Taolagnaro… hanentanana ny mpandraharaha sy hisarihana mpizahatany. L’article Vaovao tambatra a été récupéré chez Newsmada.
Minisitry ny Fahasalamana: « Tsy azo ekena ny kolikoly »
Nitsidika ny faritra Betsiboka, ny faran’ny herinandro teo, ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Rakotovao Jean Louis. Nitondra fanafody sy fitaovana hanatsarana ny tolotra fahasalamana any an-toerana ny tenany. Nahitana “table d’examen gynécologique”, “concentrateur d’oxygène”… “moustiquaire” niaraka amin’ny fitaovana ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana sy kojakoja fiarovana entina miady amin’ny tsimokaretina Covid-19 izany. Nandalo teny amin’ny CSB U sy ny Hopitaly (CHRR) any Maevatanàna koa izy ary nohamafisiny nandritra ny tafa mivantana amin’ireo mpiasan’ny fahasalamana fa laharam-pahamehana ny ady amin’ny kolikoly ho an’ny rafitry ny fahasalamana misy rehetra. “Tsy handefitra ny minisitera raha mahita tranga mifandraika amin’izany », hoy izy. Amin’ny tolotra fahasalamana koa, zava-dehibe ny fitandroana ny maha olona amin’ny fandraisana sy mandritra ny fijanonan’ny marary eny amin’ny tobim-pahasalamana. Manana mponina 413 115 ny faritra Betsiboka ary 41,7% ny tahan’ny fanatonan’ny olona tobim-pahasalamana sy hopitaly nanomboka ny volana janoary ka hatramin’ny septambra lasa teo. Misokatra avokoa ny CSB 59 rehetra manerana ny kaominina rehetra.Nandritra ny fandalovan’ny minisitra tany Maevatanàna ihany koa no nametrahany ny samboadin’ireo ben’ny Tanàna rehetra ao amin’ny kaominina manerana ireo distrika telo mandrafitra ny faritra Betsiboka. Minisitra mpiahy iny faritra iny ny tenany.VonjyA.L’article Minisitry ny Fahasalamana: « Tsy azo ekena ny kolikoly » a été récupéré chez Newsmada.
Kolontsaina sy serasera: zava-bita roa notokanana ao Toamasina sy ao Fenoarivo Atsinanana
Anisan’ny singa lehibe mandrafitra sy mampijoro firenena iray ny kolontsaina ao aminy. Miezaka ny manarina ny simba, mampahatsiahy ny tantara ary manasongadina izany ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera. Nanamarika ny faran’ny herinandro teo tao Toamasina sy tao Fenoarivo Atsinanana ny fampisongadinana sy ny fanandratana avo ny lentan’ny kanto sy ny kolontsaina malagasy. Notokanan’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina ny zava-bita roa sosona. Ho an’ i Toamasina, notokanana ny mozea Vavitiana, fantatry ny maro amin’ny hoe “Maison Nathan” teo aloha. Miorina etsy amin’ny Place Bien-Aimé, Ampasimazava, rehefa nasiana fanarenana taorian’ny fahasimbany. Trano vato lehibe efa niorina hatramin’ny fanjanahantany (taona 1928) ity trano ity ary nampiasaina amin’ny fametrahana andevo mialoha ny handefasana azy ireny hamidy na atakalo.Trano ahitana efitrano lehibe ahafahan’ireo mpanankato manao fampisehoana. Ahitana fitaovana toy ny solosaina ahafahan’ny mpanao gazety mikaro-baovao. Nambaran’ny minisitry Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana, rahateo, nandritra ny lahateniny, fa anatin’ny herinandro voalohany, azon’ny rehetra tsidihina ny mozea Vavitiana fa aorian’izay, hisy fandraisana anjara hahafahana mampihodina ny mozea.Fanoitra ho an’ny fampandrosoana Ny kanto sy ny kolontsaina no fanoitra ho an’ny fampandrosoana isam-paritra ary mipaka amin’ny firenena iray manotolo. Izay kosa ny nivoitra tetsy anoloan’ny Araben’ny Fahaleovantena, ao Fenoarivo Atsinanana, raha nitokana ny tsangambaton-dRabemanantsoa Bertrand (Dédé Fénerive) sy i Jean Fredy ny minisitra Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana, ny asabotsy 24 oktobra maraina.Mpanankaton’ny taona 60 izy roa lahy ireto ary anisan’ny nampisongadina ny kaiamba, raha samy nivoaka avy ao amin’ny tarika Miarema. Nambaran-dramatoa minisitra fa « ny kanto sy ny kolontsaina dia ilain’ny fiainan’ny olombelona. Mivoy sy manandratra ny faritra iray sy ny firenena ary ny maha olona ihany koa. Manome fiantraikany anivon’ny rafi-piaraha-monina, ankaharezana ny malahelo. Ilain’ny manam-pahasoavana sy hanaovana fety. Ampiasaina amin’ny finoana». Anisan’ny andrarezin’ny kanto sy ny kolontsaina rahateo i Dédé Fénerive sy i Jean Fredy. I Dédé Fénerive, teraka ny 19 mey 1961 ary lavo ny 1 jolay 2017. I Jean Fredy, teraka ny 4 martsa 1962 ary lavo ny 16 mey 2001. Ny zanak’izy roa lahy ireo, efa misolo toerana ny rainy avokoa.SajoL’article Kolontsaina sy serasera: zava-bita roa notokanana ao Toamasina sy ao Fenoarivo Atsinanana a été récupéré chez Newsmada.
Lomano-Analamanga: tsy ho vita amin’ity taona ity ny fifidianana
Araka ny efa notaterina teto, tokony ho nivoaka ny asabotsy lasa teo, taorian’ny fihaonana nataon’ny ligy sy ny fitaleavam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena Analamanga, ny daty hanatanterahana ny fifidianana eo anivon’ny ligin’Analamanga. Tsy izany anefa ny zava-nitranga fa nahazo baiko midina ny ligin’Analamanga fa tsy azo tontosaina intsony amin’ity taona ity ny fifidianana fa tsy maintsy miandry amin’ny taona ho avy. Araka izany, mbola mitohy indray izany ny fe-potoana hitantanan’ny filoha am-perinasa. Ity filoha ity izay nilaza fa mbola hangataka fanazavana misimisy kokoa eny anivon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Raha ny fantatra, saika niharan’ny fanafoanana fifidianana toy izao avokoa ireo taranja rehetra, toy ny judo, izay tsy afaka nanatanteraka ny fifidianana ihany koa tamin’ity volana oktobra ity. Raha ny loharanom-baovao, ny eo anivon’ny komity iraisam-pirenena olympika mihitsy ny nanafoana ny fifidianana rehetra amin’ity taona ity. Nanamafy izany ny filohan’ny Komity olympika malagasy, ny tapaky ny volana teo.Ho an’ny taranja lomano, mbola ny filoha am-perinasa izany ny hampandeha ny raharaha amin’izao fanombohana ny taom-pikatrohana vaovao izao. Hanomboka ny 8 novambra izao izany taom-pikatrohana 2021 izany, ho an’ity taranja ity. Taona ho feno tanteraka raha ny fandaharam-potoana napetraka.Mi.Raz L’article Lomano-Analamanga: tsy ho vita amin’ity taona ity ny fifidianana a été récupéré chez Newsmada.
Mise en accusation devant la HCJ : Trois dossiers d’anciens ministres à valider à Tsimbazaza
Les membres de la Commission spéciale de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice à l’Assemblée nationale se sont réunis en travaux de commission hier. L’Assemblée nationale commence le traitement des dossiers des personnalités qui seront traités au niveau de la Haute Cour de Justice (HCJ). En effet, les membres de la Commission spéciale de mise en accusation auprès de la HCJ à la Chambre basse ont tenu leur première réunion en commission, hier. Les 17 membres de cette commission, dirigée par le député de Vohipeno, Tsabotokay Honoré, ont une vingtaine de jours pour trancher sur le sujet. Si l’on se réfère à l’ordre du jour adopté à l’Assemblée nationale, la présentation de leurs travaux en commission aura lieu le 17 novembre prochain. A cette date, les députés valideront en séance plénière les dossiers qui vont être transférés à la Haute Cour de Justice pour être jugés. Hier, le président de la Commission spéciale de mise en accusation a annoncé qu’au total, 12 dossiers ont été reçus à Tsimbazaza. Tsabotokay Honoré a toutefois annoncé que trois dossiers impliquant des anciens hauts responsables étatiques seront étudiés pendant la session ordinaire en cours. Des dossiers concernant des anciens ministres du temps de la Transition de 2009 à 2013, mais aussi sous le régime Rajaonarimampianina, de 2014 à 2018. Faux et usage de faux, détournements de deniers publics, marchés fictifs, affaires bois de rose. Ce sont entre autres, les principaux chefs d’inculpation inscrits dans ces dossiers. Exil. Pour l’heure, le député de Vohipeno se défend de révéler l’identité des personnalités impliquées. Et ce, même si il y a longtemps que des noms circulent. Parmi les dossiers qui pourraient être traités en premier devant la Haute Cour de Justice, les affaires Mahafaly Olivier Solonandrasana, Anthelme Ramparany, Maharante Jean de Dieu, Onitiana Realy et Reboza Julien. Tous, ou enfin presque, sont frappés d’interdiction de sortie du territoire (IST), mais ont cependant réussi à s’exiler à l’étranger. Les investigations concernant leurs dossiers ont déjà été finalisées par les enquêteurs du Bureau Indépendant Anti-Corruption. L’identité des personnalités impliquées dans les trois premières affaires à traiter par la Haute Cour de Justice sera donc connue lors de la séance plénière du 17 novembre prochain à l’Assemblée nationale. Davis R L’article Mise en accusation devant la HCJ : Trois dossiers d’anciens ministres à valider à Tsimbazaza est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Mise en accusation devant la HCJ : Trois dossiers d’anciens ministres à valider à Tsimbazaza a été récupéré chez Midi Madagasikara.